Diyaarad helikopter ah oo ku dul dhacday dhisme dabaq oo ku yaal magaalada New York… – Hagaag.com
Diyaarad helikopter ah oo ku dul dhacday dhisme dabaq oo ku yaal magaalada New York…
Posted on 11 Juunyo 2019 by Admin in World // 0 Comments
NEW YORK, NEW YORK - JUNE 10: In this handout photo provided by the New York City Fire Department, firefighters work on the roof of 787 Seventh Avenue at 51st Street after a helicopter crashed there on June 10, 2019 in New York City. One person, reportedly the pilot and only person on board, was killed. (Photo by New York City Fire Department via Getty Images)
Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa ku dhacday dhisme dabaq ah oo ku yaal bartamaha magaalada New York ee dalka Maraykanka.
Duuliyihii waday diyaarada ayaa ku dhintey iyadoo diyaaradan aan la ogeyn sababta ay ugu dul dhacday dhismahan.
Shaqaalaha gurmadka deg-deg ah ayaa gaaray goobta uu shilkan ka dhacay oo ah wadada 787 Seventh Ave.
Ma jirto cid kale oo wax ku noqotay burburka diyaarada iyadoo aan la ogeyn halka laga lahaa diyaarada helikabtarka ah oo nooceeda lagu sheegay Agusta A109E.
Illaa iyo hadda lama oga sababta keentay in diyaaradan ay ugu dul dhacdo dhismahan oo aan lahayn meel ay diyaarad ku degi karto. Balse warar ayaa sheegaya in duuliyaha diyaarada burburtay uu sheegay inay mushkilad haysato.
Qiiq madow ayaa laga arki karay saqafka sare ee dhismahan 51dabaq ah iyadoo Boolisku amreen in dadka ku jira ay ka baxaan.
Guddoomiyaha New York Andrew Cuomo oo gaaray dhismaha ay diyaaradan ku dul dhacday ayaa sheegay in aan la ogeyn tirada dadka saarnaa diyaarada, waxana uu sheegay in xaaladu degen tahay shilkana uu ahaa mid caadi ah oo uusan la xiriirin falalka argagaxisada.